घर अमेरिकी फुटबल स्टोरीहरू ब्राजिलियन फुटबल खेलाडीहरू मैथियस परेरा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो माथियस परेराको जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, पारिवारिक जीवन, नेट मूल्य, पत्नी र जीवनशैलीको बारेमा तथ्यहरू बताउँदछ।
सरल शब्दमा भन्ने हो भने, हामी आक्रमणकारी मिडफिल्डरको जीवनमा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम क्रानिकल गर्दछौं जब उहाँ बचपनादेखि सुरु भयो जब उहाँ लोकप्रिय हुनुभयो।
हो, सबैलाई थाहा छ उसको उत्कृष्ट टेक्निकल क्षमता र पासको लागि आँखा। यद्यपि, केवल केही प्रशंसकहरूले मैथियस परेराको जीवन कहानी पढेका छन् जुन प्रेरणादायक हो। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
जोनी इभान्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
मैथियस परेरा बचपन कहानी:
बायो स्टार्टर्स को लागी, उनको उपनाम पेरी हो। म्याथियस फेलिप कोस्टा परेराको जन्म मे १51996 Hor को XNUMXth दिनमा ब्राजिलको बेलो होराइन्टेमा भएको थियो। उहाँ आफ्नो आमा, भिभियाना र बुबा अलेक्जान्ड्रामा जन्मनुभएको थियो।
म्याथियस परेराको परिवार उत्पत्ति:
आक्रमण गर्ने मिडफिल्डर एक ठूलो फिजील ब्राजिलियन नागरिक हो। अनुसन्धानका परिणामहरूले परेरा जातिलाई निर्धारण गर्न सम्भवतः त्यो पोर्तुगाली जातिको हो भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्दछ। ब्राजिलको अधिकांश भागमा जातीय समूहले प्रभुत्व जमाएको छ।
उनी सम्भवतः ब्राजिलको पोर्तुगाली भाषी क्षेत्रका हुन्। छविहरू: आईजी र पिन्टेरेस्ट।
जेठो विger्गर ब्राजिलमा जन्मिएको थियो, यो पोर्चुगलमा नै उहाँ हुर्कनुभयो। धेरै वर्ष पहिले उनका परिवार युरोपेली मुलुकमा बसाई सरेका थिए जब ब्राजिल एक वित्तीय दुर्घटनामा पर्‍यो।
जे होस्, परेरासँग ब्राजिलका राम्रा सम्झनाहरू छन्। ती मध्ये एक अस्पतालमा बिरामीको रूपमा फुटबलको प्रेममा पर्दैछन्। उनले डब्ल्यूबीएलाई भने कि:
“जब म एक बच्चा थिएँ, म न्यूमोनियालाई पक्राउ गर्थें र अस्पतालमा समय बिताउँथे। मेरो पिताले मलाई चेयर गर्न चाहानुहुन्छ, त्यसैले उहाँ फुटबलमा भेट्नुभयो। त्यो हो जब उहाँ वास्तवमै भन्नुहुन्थ्यो कि म खेलको लागि एक ठूलो पासो थियो। एक दिन, हामी अस्पतालमा खेलिरहेका थियौं अस्पताल कटरिडोरहरू जब म विन्डोमा शट गर्थें जुन नजिकै टुटेको थियो। अस्पतालमा स्टाफ अमेरिकामा पायो। "
त्यस पछि, परेराले बेलो होराइन्टेको सडकमा फुटबल खेल्ने बच्चाहरूसँग सम्झना गर्दछ जुन आफ्ना जुत्ता वा स्यान्डल गोलपोस्टहरू बनाउन प्रयोग गर्थे।
मैथियस परेरा परिवार पृष्ठभूमि:
"पेरी" ब्राजिल मा एक सुखद घर मा बस्न को याद गर्न सक्नुहुन्छ। उनको बुबा एक कार बिक्रेता को रूप मा एक राम्रो जागिर थियो जबकि उनकी आमा एक गृहिणी हुनुहुन्थ्यो।
संक्षेप मा, परिवार आराम संग रहन्छन् र पलायन पछि यथास्थिति कायम राख्न खोजे।
मैथियस परेरा फुटबल कहानी:
पोर्तुगाल आइपुगे पछि, विger्गरको आमा बुबाले लिस्बन नजिक नयाँ घर बनाउनु भयो। त्यसपछि, परेराकी आमा उनलाई र उनका चार भाइबहिनीलाई युरोपियन देशमा ल्याउन ब्राजिल फर्किए।
त्यतिबेला १२ वर्षको उमेरले लिस्बन नजिकैको क्लब ट्राफेरियामा फुटबल खेल्न सुरु गरेको धेरै समय भएको थिएन। के तपाईंलाई थाहा छ यो ट्राफरियामा थियो कि परेराले स्पोर्टि CP सीपीको युवा प्रणालीहरूमा सम्मिलित हुन सिफारिस लिए?
करियर फुटबलमा आफ्नो शुरुआती दिनहरूमा मिडफिल्डरको एक दुर्लभ तस्वीर।
स्पोर्टि CP सीपी मा रहँदा, फुटबल विडम्बना को रैंक को माध्यम बाट एक निर्बाध वृद्धि भएको थियो जब सम्म उनी २०१५-२०१ Se सीजन मा आफ्नो पहिलो टीम को लागी आफ्नो पदार्पण गरे।
१ years वर्षको उमेरमा, परेरा आफ्नो बाल्यकाल क्लब संग नियमित खेल का समय प्राप्त गर्न बाट टाढा थियो। यस प्रकार, पोर्चुगिज पक्षले उसलाई तीन क्लबहरु लाई firstण दियो अधिक पहिलो टीम को कार्य को लागी।
म्याथियस परेराको जीवनी - फेम कहानी प्रख्यात:
उदीयमान आक्रमण गर्ने मिडफिल्डर पहिलो पटक जीडी चाभेजलाई loanणमा पठाइएको थियो। उनले प्रिमिरा लीगा क्लबसँग एक प्रभावशाली जादू रहेको थियो, आठ लिगमा सात लिग गोल गर्दै उनीहरूलाई छैठौं स्थानमा राख्न मद्दत पुर्‍यायो।
उहाँसँग जीडी चाभेजको लागि खेल्ने राम्रो समय थियो। फोटोहरू: इन्स्टाग्राम।
जे होस्, परेराको एफसी नर्नबर्गलाई अर्को loanण जादू विजय र त्रासदी को मिश्रण थियो। उसले व्यक्तिगत मान्यता पायो जसमा बुन्डेस्लिगा रुकी अफ द सीजन अवार्ड को लागी नामांकन समावेश छ।
दुःखको कुरा, उनको प्रयास पर्याप्त थिएन किनकि जर्मन पक्ष टेबल मा अन्तिम मा समाप्त गरेर रेलिगेशन भोग्नु परेको थियो।
म्याथियस परेराको जीवनी - फेम टु फेम स्टोरी:
जब परेरा पछि वेस्ट ब्रोमविच Albion को लागी loanण मा पठाइएको थियो, उनी जान्दथे कि उनको loanण हस्तान्तरण को अन्त्य गर्ने समय नजिकै थियो।
Conor Gallagher बचपन स्टोरी प्लस अनकल्ड जीवनी तथ्य
नतिजाको रूपमा, उनले अंग्रेजी पक्षमा आफूलाई स्थापित गर्न कडा मेहनत गरे र क्लबलाई प्रिमियर लिगमा पदोन्नति प्राप्त गर्न मद्दत गरे।
उनको राम्रो फर्म र लोकप्रियताको दौडले उनलाई समर्थक प्लेयर अफ द सीजन अवार्ड जित्यो।
तेसैले, थ्रस्टल्सले एक बायआउट क्लज ट्रिगर गर्न कुनै समय बर्बाद गरेन जुन परेरा अगस्त २०२० मा एक Albion खेलाडी को रूप मा घोषित देखीयो। बाकी, जसरी उनीहरु भन्छन्, इतिहास हो।
Thalyta को हो? - म्याथियस परेराकी पत्नी:
२४ वर्षीय (सेप्टेम्बर २०२० को रूपमा) खुशीले विवाहित हुनुहुन्छ। माथियुस परेराकी श्रीमतीको नाम थालिता हो।
उनीहरु ५ बर्ष पहिले भेटेका थिए र तब देखि अविभाज्य छन्। Thalyta मात्र Matheus परेरा पत्नी तर उनको सबैभन्दा राम्रो साथी होईन!
म्याथियस परेरा आफ्नी श्रीमती थलिटासँग। छवि: आईजी।
उनी सुनिश्चित गर्दछन् कि उनीसँग राम्रो आराम छ र उनको ब्यापारिक मामिलाहरुको ख्याल राख्छन्। के अधिक छ, उनी उनको खेल मा भाग लिन्छन्।
विंगर आफैंलाई भाग्यशाली ठान्छिन् उसलाई भेट्न। उनीहरु बिहेमा अझै सानै छन् र अझै बच्चाहरु सँगै छन्।
मैथियस परेरा पारिवारिक जीवन:
त्यहाँ कुनै तरिका हामी व्यावहारिक रूपमा आफ्नो परिवार को उल्लेख बिना विंगर को जीवन कहानी को बारे मा कुरा गर्न सक्छौं। हामी तपाइँ Matheus Pereira को आमा बुबा र भाइबहिनीहरु को बारे मा तथ्यहरु ल्याउन।
साथै, हामी उसको भाई र आफन्तहरु को बारे मा तथ्यहरु प्रदान गर्न को लागी तपाइँ उसको एक पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
माथियस परेरा पिताको बारेमा बढि:
विger्गरको बुबा अलेक्ज्यान्ड्रे हो। हामीले पहिले उल्लेख गर्यौं कि उनी ब्राजिलका एक कार बिक्रेता थिए। उनी फुटबल खेलाडी पनि हुन् जसले पोर्तुगाल बसाई अघि बेलो होरिजोन्टे-आधारित क्लब - एटलेटिको मिनिरोलाई समर्थन गरे।
म्याथियस परेरा आफ्नो बुबा अलेक्जान्डरको साथ: फोटो: IG
पोर्चुगलमा बसोबास गरेपछि एलेक्जान्ड्रेले आफ्नो परिवारको पालनपोषण गर्न स्काईको लागि केबल टिभी बेच्न थाले। प्राय: परेरा खेलहरूमा भाग लिने सहयोगी बुबा, जतिसुकै टाढा भए पनि, आफ्नो छोरा को हुन् भनेर गर्व गर्छन्।
म्याथियस परेरा आमाको बारेमा:
भिभियाना आक्रमणकारी मिडफिल्डरकी आमा हुन्। उनी ब्राजिलमा घरधनी थिइनन् तर परिवारको आम्दानी पूरकमा पुर्‍याउन सहयोग पुर्‍याउन क्लीनरको रूपमा काम लिइन्।
म्याथियस परेरा आफ्नो आमा, भिभियानासँग। क्रेडिट: आईजी।
म्याथियस परेरा भाई बहिनीहरू र आफन्तहरूका बारे:
विger्गरका s जना भाई बहिनीहरू छन् जसलाई उसले अझसम्म खुलाउन सकेको छैन। उनका हजुरबुबा मध्ये एक - अर्बानो बोनिफासियो दा कोस्टा ब्राजिलको बेलो होरिजोंटेको एटलेटिको मिनिरो क्लबमा किट म्यान र मासेर थिए।
म्याथियस परेरा आफ्नो बुबा र अज्ञात सदस्यहरूसँग उनको परिवारका साथ। क्रेडिट: आईजी।
फुटबलर हजुरआमाको कुनै रेकर्ड छैन। त्यस्तै उनका काका, काकी, काका, भाईबहिनी र भतिजाको पनि पहिचान हुन सकेको छैन। उनीसँग डेभी भन्ने चचेरो भाई छ र अक्सर उसको तस्विर चनामा अपलोड गर्दछ।
म्याथियस परेरा कजिन भाईसँग क्रेडिट: ग्राम
मैथियस परेरा निजी जीवन:
पेरी को फुटबल बाट टाढाको जीवन को बारे मा कुरा गरौं। त्यहाँ तीन चीजहरु छन् कि उनको व्यक्तित्व खेल बाहिर परिभाषित छन्।
उनीहरु मा उनको विनम्रता, सिक्न को लागी इच्छा र उनको व्यक्तिगत र निजी जीवन को बारे मा तथ्यहरु लाई प्रकट गर्न को लागी खुलापन शामिल छ।
उसको दैनिक तालिकामा काम, आराम, खान, सुत्न समावेश छ। माथि उल्लेखित तालिका बाहिर, परेरा यात्रा गर्न मनपराउँछिन्, परिवार र साथीहरूसँगै ह्या hanging्गआउट गर्नका साथै प्राकृतिक शरीरहरूको नजिक रमाइलो गर्दछन्।
मैथियस परेरा जीवनशैली:
फुटबलर जुनूनको साथसाथै ठूलो पैसा यो उत्पन्न को लागी खेल मा छ। २०२० मा उनले वेस्ट ब्रोम एल्बियन संग एक सम्झौता मा हस्ताक्षर गरे कि उनी £ ३१२,००० को एक वार्षिक तलब कमाउनेछन्।
यस प्रकार, उनको नेटवर्थ आगामी वर्षहरुमा £ १,,18,620२० बाट सयौं पाउण्ड सम्म उल्का वृद्धि रेकर्ड गर्ने अनुमान छ।
पेरी को प्रायोजन र अनुमोदन बाट उनको लागि tricking आय छ। जे होस्, यो अझै सम्म उनको चरित्र मा उनको छिटो बढ्दो धन को दिखावा गर्न को लागी छैन।
यस प्रकार, यो उसको तस्वीरहरु विदेशी कारहरु को छेउमा उभिएको देख्न वा एक लक्जरी घर को आराम को आनन्द देख्न को लागी दुर्लभ छ।
म्याथियस परेराको बारेमा तथ्यहरू:
विger्गरको यो रोचक जैवलाई लपेट्नको लागि, यहाँ थोरै-ज्ञात वा अनटल्ड तथ्यहरू छन् उहाँबारे।
तथ्य # १ - म्याथियस परेराको तलब ब्रेकडाउन र प्रति सेकेन्ड कमाई:
प्रति महिना £ 26,000
प्रति हप्ता £ 5,991
प्रति दिन £ 856
प्रति घण्टा £ 36
प्रति मिनेट £ 0.6
प्रति सेकेन्ड £ 0.1
यो के हो तपाईं उनको बायो हेर्न शुरू गर्नुभयो देखि मैथियस परेरा कमाएको छ।
तथ्य # २ - म्याथियस परेरा धर्म:
परेरा एक विश्वासी हो जो ईसाई धर्म को अभ्यास गर्दछ। वास्तव मा, उहाँ Igreja Evangelica Pentecostal को रूप मा परिचित एक इभान्जेलिकल चर्च संग बलियो लिंक छ।
जब वेस्ट ब्रोम प्रिमियर लीग मा पदोन्नति भयो, परेरा एक टी शर्ट मा पदोन्नति मनाईयो कि लेखिएको थियो, "म भगवान को हुँ।"
तथ्य #3- मैथियस परेरा प्रोफाइल:
फुटबलर 76 अंक को एक क्षमता संग points अंक को एक समग्र रेटिंग छ। यो बुझिन्छ कि हमला गर्ने मिडफिल्डर उच्च रेटिंग को योग्य को लागी एक क्लब मा लामो समय सम्म रहन सकेन।
वेस्ट ब्रोम संग उनको दीर्घकालीन सम्झौता निश्चित रूप मा उसलाई आफ्नो वर्तमान सम्भावित रेटिंग पार गर्न मद्दत गर्नेछ।
उनीसँग गरीब तर अस्थायी रेटिंगहरू छन्। विशेषता: SoFIFA
तथ्य #4- अन्तर्राष्ट्रिय शुल्क:
यो अचम्मको कुरा हो कि परेराले आफ्नो जन्म देश ब्राजिलको सट्टा पोर्तुगालको प्रतिनिधित्व गर्ने छनौट गरे। आफ्नो छनौट पछाडि कारणहरूको वर्णन गर्दै, मिडफिल्डरले टिप्पणी गरे:
"म मेरो सल्लाह विश्वास गर्छु ब्राजिल तर मेरो दिल पोर्चुगलको हो। यो यूरोपीय देशमा थियो जुन मेरो उत्तम सम्झनाहरू उनीहरूका मूल हुन्। पोर्चुगल एक मिडियम राष्ट्रिय टीम हुन प्रयोग गरियो, तर तिनीहरू अब सर्वश्रेष्ठमा छन्। तिनीहरूको लागि खेल्न? एक HERNDRED PERCENT। "
पुरा नाम म्याथियस फिलिप कोस्टा परेरा
जन्म मिति मे १51996 XNUMX को १th औं दिन
जन्मस्थान ब्राजिलको बेलो होराइन्टेको शहर
प्ले गर्दै मिडफिल्डर / विger्गरलाई आक्रमण गर्दै
आमाबाबुले भिभियाना (आमा), अलेक्जान्ड्रे (बुबा)
सोख यात्रा, परिवार र साथीहरूको साथ ह्या hanging्ग आउट साथ साथै प्राकृतिक शरीरको नजिक आराम
बार्षिक तलब £ 312,000
नेट मूल्य £ 18,620
म्याथियस परेरा जीवनी मा यो आकर्षक लेख्न को लागी पढ्न को लागी धन्यवाद। हामी आशा गर्छौं कि यसले तपाईलाई विश्वास गर्न हौसला प्रदान गर्दछ कि स्थिरताले सबैलाई जित्छ, जसरी परेराले आफ्नो राम्रो फार्मलाई कायम राखे पनि रिजर्वेशन-जोखिमको पक्ष एफसी नर्नबर्गका लागि खेल्दा।
के तपाइँ यस लेखमा सही नदेखिने कुनै चीज भेट्नुभयो? हामीलाई टिप्पणी सेक्सनमा थाहा दिनुहोस्।
मैक्सवेल कर्नेट बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू